LG Q60: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
LG Q60: Ọkara ntanetị ọhụụ na igwefoto azụ atọ
Oge awa ikpeazụ a abụwo nnukwu ara na usoro ngosi ekwentị. LG egosila ụdị ọhụrụ ya maka etiti. Ọ bụ maka LG Q60, nke na-abịa iji wuchaa ọtụtụ ụlọ ọrụ Korea nke na-adịghị amalite ịmalite. Maka ụdị a, ụlọ ọrụ na-ahapụ anyị ọtụtụ usoro mgbanwe. Karịsịa, ọnụnọ nke igwefoto azụ azụ atọ na-adọrọ adọrọ.
Nke a dịgasị iche iche nke Q ụdị nke ụlọ ọrụ ahụ bụ nke etiti na gam akporo. N'oge na-adịbeghị anya ha hapụrụ anyị otu nlereanya dị ka Q9, nke ị nwere ike ịhụworị mmeghari ohuru na nke a. Ugbu a, tupu ọ pụta na MWC 201, ụlọ ọrụ ahụ hapụrụ anyị LG Q6 a.
Izu ndị a ika anọwo na ozi ọma maka ya elu nso, na mgbakwunye na igbu oge na mwepụta nke gị mpịachi ama. Ka ọ dị ugbu a, tupu ikpughe ọhụụ ọhụrụ ya na MWC 2019, ha hapuru anyi udiri etiti a. Anyị amaghị ma ekwentị ọ ga-abụ na ihe omume a na Barcelona.
1 Nkọwa LG Q60
2 LG Q60: Bet na foto
Nkọwa LG Q60
On a oru larịị ọ bụ a pụtara nkịtị ufọt ufọt nso. N'agbanyeghị na nke a LG Q60 pụta ìhè karịsịa n'ọhịa nke foto. Otu mpaghara nke ọtụtụ ụdị na-ekwusi ike na ekwentị ha. Ndị Korea kwụkwara na igwefoto dị ka ihe dị iche. Ndị a bụ nkọwa ya zuru ezu:
Ihuenyo: FullVision 6,26 sentimita asatọ na mkpebi HD + na nhazi 19: 9
Nchekwa ime: 64GB (gbasaa na microSD ruo 2TB)
Rear igwefoto: 16MP + 2MP + 5MP
Igwefoto n'ihu: 13MP
Njikọ: GPS, GLONASS, WiFi 802.11 a / c, Bluetooth
ndị ọzọ: Onye na-agụ akara mkpịsị aka, ụda DTS: X 3D, MIL-STD 810G nchedo, bọtịnụ maka Google Assistant
O doro anya ika a chọrọ iju ya na LG Q60 a. Ọ na-abịa na nkọwapụta zuru oke maka etiti. Ọ bụ ezie na enweghị obi abụọ ọ bụla, ntinye aka na igwe foto dị mma doro anya na ngwaọrụ ahụ. Anyị na-ahụkwa na nnukwu ngebichi nwere ọkwa nwere ọkọlọtọ na ika ahụ.
LG Q60: Bet na foto
O doro anya na, ihe kasị pụtara ìhè ihe a ama bụ akụrụngwa nke igwefoto ha. Ebe ọ bụ na ọ bụ ezie na gam akporo ọ bụ ihe a na-ahụkarị ka anyị chọta ụdị etiti dị iche iche na igwefoto abụọ, ha juru igwefoto a okpukpu atọ anya. Ha na-agbaso nzọụkwụ nke Samsung, na ha Galaxy A7 nke nwekwara ese foto azụ atọ.
Na LG Q60 anyị na-ahụ kamera ndị a dị ka akara dị n'azụ ha. Isi ihe mmetụta bụ megapixels 16. Mgbe ahụ, anyị nwere nke abụọ 2 megapixel otu nke na-elekọta nke omimi agụ na nke atọ 5 megapixel otu nke nwere ibu mbara n'akuku oghere. Mgbe anyị nọ n’ihu, anyị na-ahụ ihe mmetụta sensọ 143pipipixel. Enweghị data ọzọ e nyere banyere igwefoto ekwentị ndị a.
Na mgbakwunye na nke a, otu n'ime atụmatụ pụtara ìhè nke LG Q60 bụ nke ahụ bụ MIL-STD 810G ndị agha kwadoro. Ya mere, anyị maara na ọ bụ ihe na-eguzogide ọgwụ smartphone. Na mgbakwunye, ọ na-arịwanye elu ịhụ ụdị nke ụdị Korea nwere asambodo a. Yabụ n'ezie, a ga-agbakwunye ụdị ndị ọzọ n'oge na-adịghị anya.
Anyị na-achọtakwa ọgụgụ isi na ya. Ọ ga-eme ka kamera ndị a anyị hụrụla kwalite. Ihe bụ ihe ọzọ, Enwere bọtịnụ maka Google Assistant. Akụkụ ọzọ anyị na-ahụ na ngwaọrụ LG. N'afọ gara aga, njedebe ya dị elu bịara na ụdị bọtịnụ a. O yiri ka ọ bụ nzọ doro anya na nke ha. N'aka nke ọzọ, ụda bụ isi, ebe ọ bụ na ekwentị na-abịa na nkwado maka DTS: X 3D na mgbakwunye na Gburugburu.
Ugbu a Enweghị nkọwa e nyere na ọnụahịa ma ọ bụ ụbọchị ntọhapụ nke LG Q60 a gaa ahịa. A ga-enwe naanị otu ụdị ekwentị, ọ dịkwa ka ọ ga - enwe naanị otu agba ya. Enwere ike ịmatakwu ihe gbasara ngwaọrụ na MWC 2019. Anyị ga-ege ntị na nke ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG Q60: Ọkara ntanetị ọhụụ na igwefoto azụ atọ
UMIDIGI S3 PRO: Uzo ohuru nke ika nke ị nwere ike iburu
Kiwi Browser bụ ngwa nchọgharị na-adịghị duu ma na-agbachi nkịtị nke na-ewu ewu